Ny marika - Masinina sy fitaovana Xuzhou Bonovo
Ny tarika anay:
Xuzhou Bonovo Masinina & Fitaovana dia miorina ao an-tanànan'i Xuzhou, toerana famokarana milina fananganana lehibe indrindra sy voalohany indrindra any Shina, izay marika marobe malaza eran'izao tontolo izao toa ny Caterpillar, Volvo, John Deere, Hyundai ary XCMG no nanondrana sy nanangana ny ozinin'izy ireo.
Miaraka amin'ny haitao fandrosoana mandroso sy tombony amin'ny loharanon-karena amin'ny clusters indostrialy, Bonovo dia namorona fizarana asa lehibe 3 (Bonovo Attachments, Bonovo Undercarriage Parts ary DigDog) ary ny ekipan'ny Bonovo dia afaka manome anao hatrany ny karazana milina avo lenta na inona na inona tompon'ny marika, mpivarotra na mpampiasa farany.
Bonovo Attachments dia natokana hanampiana ny mpanjifa hanana fahaiza-manao sy famokarana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanomezana fifamatorana kalitao avo lenta hatramin'ny 1998. Ny marika dia fantatra amin'ny famokarana siny avo lenta, mpametaka haingana, grapples, arm & booms, pulverizers, riper, thumbs, rakes, breakers ary compactor ho an'ny karazana excavator, loader steer loader, loader wheel ary bulldozer.
Ny Bonovo Undercarriage Parts dia nanolotra karazana akanjo ana-baoritra ambanin'ny tany ho an'ny mpitsongo sy mpanao dozers. Fantatray fa ny fampifangaroana tsara ny kalitaon'ny vy avo lenta sy ny teknolojia fitsaboana hafanana mandroso no antony lehibe aorian'ny fahombiazan'ny marika BONOVO. Ny faritra misy anay dia natsangana tamin'ny kalitao mendrika, azo itokisana ary antoka maharitra kokoa azonao ianteherana tanteraka. 70,000sqf trano fanatobiana entana dia afaka manatanteraka hatrany ny fandefasana maika, ary ny R&D matanjaka ary koa ny ekipa mpivarotra matihanina dia azo antoka fa manome fahafaham-po avy hatrany ny fepetra takian'ny fanaingoana anao.
DigDog dia marika fianakaviana vaovao an'ny vondrona Bonovo nanomboka tamin'ny taona 2018. Ny tantaram-piainany dia nanomboka tamin'ny taona 1980 fony izy nampiasaina ho marika siny malaza any Afrika atsimo. Nandova an'ity marika tsara tarehy ity i Bonovo, ny zony hisoratra anarana ary ny sehatra ofisialy 3 taona taorian'ny fatiantoka. Rehefa avy niasa nandritra ny taona maro ny asa mafy sy ny fanangonan-karena ny indostria, lasa marika mendri-kaja ny DigDog ho an'ireo mpitrandraka kely sy mpandefa mpamily. Samy mino isika fa "Ny alika raha ny marina dia mahay kokoa mihady noho ny saka". Ny tanjonay dia ny hahatonga ny DigDog ho marika fanta-daza amin'ny mpitrandraka kely miasa tsara ao an-tokotaninao ary ny teny filamatray dia: "DigDog, ilay mpitrandraka mahatoky anao!"